China Umatshini ococekileyo oCoca iphepha oCoca umatshini oCociweyo oCoca umatshini mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
Iphepha lokucoca ucoceko lomatshini oCociweyo oCocekileyo oCoca iPulp
Ukuvumelana okuphakathi kokucoca esinye sezixhobo eziphambili zokucoca i-pulp, ngakumbi iphepha lokucoca iphepha, inkunkuma yokurisayikilisha iphepha ebaluleke kakhulu. Izixhobo ezisebenzisa "isantya senkumba" kwi-pulp, sombulula ngokupheleleyo isicoci soCociweyo kwislurry jet stream siphazamiso, i-slag iqinisekisa ukusebenza okuhle, kodwa inciphisa nelahleko yoxinzelelo. Ukucoca okuphakathi kokuphakathi kusetyenziswa ububanzi, zombini ukungqinelana okuphezulu kwempuphu kucociwe ngaphambi kwemachi ...
Ukuvumelana okuphakathi kokucoca esinye sezixhobo eziphambili zokucoca i-pulp, ngakumbi iphepha lokucoca iphepha, inkunkuma yokurisayikilisha iphepha ebaluleke kakhulu. Izixhobo ezisebenzisa "isantya senkumba" kwi-pulp, zisombulule ngokupheleleyo isicoci soCociweyo kwislurry jet stream siphazamiso, i-slag iqinisekisa ukusebenza okuhle, kodwa iyanciphisa nelahleko yoxinzelelo.
Ukucoca okuphakathi okuphakathi kusetyenziswa ububanzi, zombini ukungqinelana okuphezulu kwempuphu kucociwe ngaphambi kokuba umatshini usetyenziselwe ukukhetha ukucocwa kwempumlo.
Isicoci se-pulp sisetyenziselwa ukususa ukungcola okunzima okunje ngentsimbi, isikhonkwane sencwadi, uthuthu, isanti kunye nebhloko yeglasi eyaphukileyo njl.njl. Kunokunciphisa ukunxiba kwezixhobo zilandelayo kunye nokuphucula umgangatho wefayibha. Sesona sixhobo siphambili sokuphinda kusetyenziswe iphepha, ukusebenzisa ifayibha kunye nenxalenye yokungcola, kunye nokwenza ukungcola okunzima ukwahlulwa kwintlama, ukufezekisa injongo yokucoca umgubo.
isetyenziselwe ukususa zonke iintlobo zokungcola okunzima kwiphepha lephepha, njengama-staples, ilitye, iiglasi, njl.
Igumbi lokungena kwegumbi lokungena
Amandla eddy enamandla
Indawo ebonakalayo yoxinzelelo oluphantsi subarea
Oku kwenza ukwamkelwa kunye nokungcola kwahlulwe ngokupheleleyo.
Nxiba iiceramics cone yokumelana, ubomi obude benkonzo.
I-cone ende eyenzelwe ngokukodwa ine-taper angle encinci kunye nokusebenza kakuhle kokucoca.
Izixhobo ezinekhabhinethi yokulawula i-PLC, efanelekileyo kwaye kulula ukuyilawula, ikhuphe ngokwaneleyo ukungcola.
Ukukhutshwa kwe-slag ngokuzenzekelayo
Ukuqhubeka kokukhutshwa kwe-slag evulekileyo.
Uthotho lwe-HT oluphezulu lokuhambelana ngokucocekileyo lunokuphelisa ukungcola okunzima okungaphezulu kwe-3mm ubukhulu kwisitokhwe sephepha esenziwe ngokutsha.
Njengesixhobo sokujonga esirhabaxa, ihlala isisisixhobo esisehla se-hydrapulper. Inokufakwa nakwisixhobo esibalulekileyo
Ukuqinisekisa ukusebenza kwezixhobo zokusebenza ezisebenza ngokuhla.
Egqithileyo Isicoci sePulp esinezixhobo ezingama-350 sezixhobo zokurisayikilisha
Okulandelayo: Insimbi engenasici 304 ukuxinana okuphezulu okucocekileyo iphepha lokusila iphepha lokucoca iphepha ukwenza umatshini ixabiso